Ebɛnadze Nye Bible Adzesũa? | FAQ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian America Mmum Kasa Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazil Mmum Kasa Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish French Ga (Nkran Kasa) Galician Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Itsekiri Japanese Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Jehovah Adasefo yɛ Bible adzesũa ho nhyehyɛɛ dze bua nsɛmbisa ahorow bi tse dɛ:
Aso Nyankopɔn dwen mo ho ankasa?
Mebɛyɛ dɛn ama m’awar eetu mpon?
Mebɛyɛ dɛn enya enyigye wɔ asetsena mu?
Nsɛm a nkorɔfo taa bisa fa hɛn Bible adzesũa ho nhyehyɛɛ no ho mbuae ahorow na odzidzi do yi.
Ɔkwan bɛn do na wɔyɛ adzesũa no? Yɛfa asɛntsir bi tse dɛ “Nyankopɔn” anaa “awar,” nna yɛahwehwɛ kyerɛwnsɛm ahorow a ɔfa dɛm asɛntsir no ho no mu. Aber a yɛdze kyerɛwnsɛm ahorow no yeyɛ ntotoho no, yehu dza Bible mua no kyerɛkyerɛ fa asɛntsir no ho, na ɔno so kyerɛ dɛ yɛma Bible no ankasa kyerɛkyerɛ no ho mu.
Yɛdze nwoma What Does the Bible Really Teach? no dzi dwuma na aaboa ma Bible no sũa aayɛ mberɛw. Dɛm nwoma yi kã dza Bible no kyerɛkyerɛ ankasa fa Nyankopɔn ho, Jesus, hɛn daakye, nye nsɛntsir ahorow pii.
Sɛ wɔnye obi sũa Bible a, otua ahen? Wonntua hwee, na bo biara nnda nwoma no a wɔdze sũa adze no so do.
Adzesũa no gye ber tsentsen ahen? Nyimpa pii yi bɛyɛ dɔnhwer kor si hɔ dapɛn biara nye hɛn sũa Bible no. Naaso yennyi mber tsentsen pɔtsẽe bi a yɛnye obi sũa adze. Wo nhyehyɛɛ anaa w’adagyer na ɔbɛkyerɛ mber tsentsen a yɛnye wo bosũa adze.
Sɛ mekã dɛ wɔnye me mbosũa Bible no a, ebɛn asɛm besi? Sɛ ekã dɛ wɔnye wo mbosũa Bible no a, Jehovah Adasefo no mu kor bɛba abɛsera wo wɔ bea nye ber a oye ma wo. Onyii no dze minitsi kakraabi bɛkyerɛ wo mbrɛ yesi sũa Bible no. Sɛ w’enyi gye ho a, nna aatoa do.
Sɛ mepen do dɛ wɔnye me nsũa Bible no a, aso ɔsɛ dɛ mebɛyɛ Jehovah Adasefo no mu kor a? Daabi. Jehovah Adasefo enyi gye ho paa dɛ wɔdze Bible no bɛkyerɛkyerɛ nkorɔfo, naaso yɛnnhyɛ obiara mma ɔmmbɛyɛ hɛn som no munyi da. Mbom, yefi obu mu da dza Bible no kyerɛkyerɛ edzi, eso yɛgye to mu dɛ obiara wɔ hokwan dɛ ɔpaw dza ɔbɛgye edzi.​—1 Peter 3:15.
Ibotum enya Bible mu esũadze ahorow wɔ ber nye bea a oye ma wo a irunntua hwee.